10 अद्भुत LGBT मैत्री गन्तव्यहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 अद्भुत LGBT मैत्री गन्तव्यहरू
तपाईं एक डिवा हुनुहुन्छ कि, fashionista, कुरो, समलि .्गी, समलि .्गी, वा आत्म परिभाषा को लागी तयार छैन, यी 10 भयानक LGBT गन्तव्यहरू सामेल हुनेछन् र तपाईंलाई मनाउँनेछन्. पेरिस मा चुम्बन देखि बर्लिन मा एक रक स्टार जस्तै भोज गर्न, यी आश्चर्यजनक यूरोपियन शहरहरू सबै समान अधिकारको बारेमा छन्, गर्व, र इन्द्रेणी को सबै र in्ग मा प्रेम.
1. विश्वमा अद्भुत LGBT- मैत्री गन्तव्यहरू: बर्लिन
यो सबै विश्वमा पहिलो समलि .्गी र लेस्बियन संगठनको जगको साथ शुरू भयो. 1897 पहिलो चरणमा चिन्ह लगाएको वर्ष हो बर्लिनको समलिay्गी र विश्वको समलिंगी राजधानीमा रूपान्तरण.
सौन्दर्य र प्रेम सबै रूप मा आउँछ, रंगहरू, र यौन. बर्लिन सबैभन्दा सहनशील मध्ये एक हो, खोल्नुहोस्, र विश्व मा शहरहरु स्वागत गर्दै. बर्लिन यूरोपमा एक अद्भुत LGBT गन्तव्य हो र स्वागत छ सबै प्रकारको माया. आज, बर्लिन परम LGBT गन्तव्य हो, तर यसले २० औं शताब्दीमा नै यसको लोकप्रियता हासिल गरेको छ, शहरले बनाएको लामो मार्ग धेरै यति प्रभावशाली छ.
शोनबर्गमा Nollendorfplatz बर्लिन मा कुख्यात समलि scene्गी दृश्य को मुटु र जंगली आत्मा हो।. यहाँ, तपाईं पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ, तिम्रो, पेय, र LGBT जीवन र संस्कृतिको आनन्द लिनुहोस्.
LGBT एक्स्ट्राभागान्जाको अनुभव लिन उत्तम समय ग्रीष्मकालीन हो, महाकाव्य CSD बर्लिन मा. लगभग 1 लाखौं मानिस र सयौं सजावट फ्लोटहरु विश्व मा सब भन्दा ठूलो गर्व परेड को एक सिर्जना, समान अधिकार र इन्द्रेणका सबै र colorsहरूमा प्रेम गर्न स्वतन्त्रताको लागि.
गर्न उत्तम चीजहरू
समलिंगी स्कुल्स संग्रहालयको भ्रमण गर्नुहोस्, समलि .्गी आन्दोलनको पहिलो स्मारक, प्रसिद्ध मारीएटा बार, क्याफे बेरियो, सब भन्दा पुरानो हेइल वेल्ट समलिंगी क्लब, वा KitKat-Klub मा उत्तम क्वेर पार्टीको लागि.
2. नेदरल्याण्डमा अद्भुत LGBT गन्तव्य: एम्स्टर्डम
जब तपाईं समलि sex्गी विवाहलाई वैध बनाउने संसारको पहिलो देश हुनुहुन्छ, तपाईं पनि एक सबैभन्दा गजब र LGBT- अनुकूल गन्तव्यहरू संसारमा. त्यसैले, रमाईलो र अचम्मको एम्स्टर्डम युरोपको पहिलो शहर हो समलिंगी गेम्सको आयोजना गर्ने 1998 र एम्स्टर्डमको गर्व परेड विश्व मा एक को सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ.
शहरमा कुन ठाउँहरू हिट गर्ने भन्नेबारे तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यसो भए रोक्नुहोस् गुलाबी पोइन्ट, LGBT को बारेमा जानकारीको लागि ठाउँ- एम्स्टर्डममा मैत्री स्थानहरू. एम्स्टर्डमसँग एक उत्तम छ रात्रि जीवन दृश्य, तर घाम अस्ताउनु अघि, तपाईं अर्को सडक र क्षेत्रहरु मा टहल्न पर्छ, जहाँ LGBT दृश्यले सास फेर्छ र लात हान्छ: Reguliersdwarsstraat, ऐतिहासिक कर्कस्ट्रैट, एम्स्टेल, र त्यसपछि एम्स्टर्डममा शानदार LGBT रात्रि जीवन दृश्यको लागि Zeedijk र Warmoesstraat.
महारानीको टाउकोमा कुख्यात ड्र्याग दृश्य पत्ता लगाउनुहोस्, गेटोमा ककटेलमा चुस्नुहोस्, एम्स्टर्डमको LGTB बुकस्टोरमा प्रेरणा पाउनुहोस्, मेरी, र Reguliersdwarsstraat सड़कमा वर्जित वा एक्जिट क्लबहरूमा पार्टी. साथै, एम्स्टर्डम नहर गर्व विश्व मा भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा अनौंठो गर्व परेड हो.
3. बेलायतमा सर्वश्रेष्ठ LGBT मैत्री गन्तव्य: ब्राइटन
सन् १ 30 .० को ब्राइटन सबैको लागि सुरक्षित आश्रय हो जुन उनीहरूको लैंगिकता खोजी गर्न आवश्यक पर्दछ. एक पटक समुद्री किनार शहर यूके मा एक अनुकूल LGBT गन्तव्य भएको छ, नजिक तर राजधानीबाट टाढा.
केम्प टाउन छिमेकी ब्राइटनको LGBT क्षेत्र हो, यसको बुटिक होटेलमा धन्यवाद, पबहरूमा, र रेस्टुरेन्टहरू. यहाँ, तपाईंले आश्चर्यजनक कम्पनहरू पाउनुहुनेछ, चिसो वातावरण जहाँ तपाईं प्रेम सबै रूपहरूमा मनाउन सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, यदि तपाइँ तपाइँको प्रेमिकाका साथ सबै मार्गमा जानको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि ब्राइटनसँग रोयल प्यावेलियन जस्ता केही विवाह स्थलहरू छन्, र सिधा त्यहाँबाट चार्ल्स स्ट्रिट वा ब्राइटन बीचमा उत्सवहरू सुरू हुन्छ.
समलिay्गीमा पिन्टको आनन्द लिनुहोस् बुलडग पब, तर पहिले ब्राइटन सौनामा आराम गर्नुहोस्, र बदलामा रात समाप्त, शीर्ष LGBT रात्रि जीवन क्लब.
4. जर्मनीमा अद्भुत LGBT मैत्री शहर: कोलोन
मानिसहरु भन्दा अधिक पब संग शहर, र अरू कहीँ भन्दा बढी गर्व घटनाहरु, कोलोन युरोपमा सब भन्दा डरलाग्दो र LGBTQ अनुकूल मैत्री स्थल हो. कोलोन यति LGBTQ मैत्री छ कि यसको आफ्नै गइली टुर छ, ताकि तपाईं कुनै स्वाद र इन्द्रेणी रंग को लागी शहरको उत्तम राखिएको रहस्य पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ.
साथै, कोलोन अन्तिम LGBT गन्तव्य हो, किनभने यो छ2समलि .्गी दृश्यहरू, हो त्यो सहि छ. पुरानो हेउमार्क-मैथियोस्ट्रेसे र शहरी बर्मुडा ट्राइएंगल कडा भीडको लागि. पश्चिममा उत्तम पार्टीहरू र नृत्य क्लबहरू छन् तपाईंको शरीर र पूर्वमा राखिएको ब्याक क्लासी र परम्परागत ह्याoutआउट ठाउँहरूका लागि.
दुबै भेट्न समय छैन? कुनै चिन्ता छैन! किनभने एस-बहन भूमिगत रेलको साथ, तपाइँ धेरै पटक पछाडि पछाडि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको इच्छा र सुपर-फास्ट.
कोलोनको क्रिस्टोफर स्ट्रीट दिनलाई नभुल्नुहोस्, पाठ्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध कोलोन प्राइड. साथै, कोलोनको समलि .्गी क्रिसमस बजार, फेब्रुअरीमा र कार्निवल. भोज पछि डेकको लागि5वा Amadeus.
5. फ्रान्स मा अद्भुत LGBT मैत्री गंतव्य: पेरिस
संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक शहरले हरेक दिनको हरेक मिनेट प्रेमको उत्सव मनाउँछ, र तपाईंलाई इन्द्रेणीका सबै र in्गहरूमा तपाईंको प्रेमको आनन्द मनाउन स्वागत छ. ग्लैम को पूर्ण, शैली, कक्षा, र रमाईलो, पेरिस सबैभन्दा भयानक LGBT मध्ये एक हो- संसारमा मैत्री गन्तव्यहरू.
प्यारा मा सुन्दर माराई समलि scene्गी दृश्यको केन्द्र हो, सबै लोकप्रिय LGBT स्थलहरू साथ प्रसिद्ध प्लेस डे ला बास्टिलमा अवस्थित छन्, रिपब्लिक स्क्वायर, र होटल डि Ville. वर्षभरि, जनवरी देखि जुलाई सम्म, त्यहाँ LGBT समुदाय को लागी समर्पित घटनाहरु छन्: चाडहरूमा, कला, फिलिम, र पक्कै पनि गर्व परेड. यहाँ, तपाईं घर मा सही महसुस हुनेछ, र LGBT फ्रान्सेली समुदाय अन्वेषण र पेरिस पत्ता लगाउन धेरै तरिकाहरू छन्.
गो गो गो डन्सरहरू र सेक्सी नाचहरूको लागि रैड बर्न, Cite de la Mode et du du म्याकरुन र Seen का अद्भुत दृश्यहरूको लागि डिजाईनको छतमा डेबोनेर क्याफे, सबै नयाँ र ट्रेंडी फ्रान्सेली कलाकारहरूको लागि बास्टिल जिल्लामा Badaboum बिस्ट्रो, र पृष्ठभूमिमा एफिल टावरको साथ चुम्बन.
6. अस्ट्रियामा अद्भुत LGBT मैत्री शहर: भियना
धनी अस्ट्रिया इतिहास र संस्कृति समलिay्गी सम्राटहरूको बारेमा कथाहरू भरिएका छन्, त्यसैले LGBT भइरहेको- मित्रैलो यो सुन्दर शहर को डीएनए को हिस्सा हो. त्यसैले, यसमा कुनै अचम्म छैन कि भियनामा तपाईं जान सक्नुहुन्छ2समलि Gay्गी शहर LGBT समुदाय र जीवनको इतिहास पत्ता लगाउन. साथै, समान रूपमा हाम्रो सूचीमा अन्य LGTB मैत्री गन्तव्यहरू, त्यहाँ अधिक LGTB घटनाहरू तपाईं बर्ष भर गणना गर्न सक्नुहुन्छ.
बर्षको सब भन्दा विशेष LGBT घटना मध्ये एक इन्द्रेणी बल हो. होटल शोनब्रुन यस भव्य बललाई होस्ट गर्दैछ, जहाँ तपाईं वाल्टज नृत्य गर्न सक्नुहुनेछ र अद्भुत बल गाउन र टक्सिडोमा तपाईंको फेसनको उत्तम दर्सा.
क्याफे Savoy मा Viennese कफी स्वाद, स्वर्ग भियना क्लबमा मिस क्यान्डीको साथ पार्टी, भन्नुहोस् म एउटा अचम्मको एल्पाइन सेटिंगमा गर्छु, र तपाईंको विवाहको फोटोहरू लिनुहोस् जब शहरको उल्लेखनीय वास्तुकला तपाईं वरिपरिका हुन्छन्.
7. आयरल्याण्डमा अद्भुत LGBT मैत्री शहर: डब्लिन
शायद आयरल्यान्ड धेरै धेरै कडा रूपमा ज्ञात छ, धार्मिक, र समय मा स्थिर. तथापि, डबलिनको त्यस्तै स्थिति छैन जुन जीवन्त छ, रमाईलो, र धेरै LGBT- मैत्री. मा 2015, समलि .्गी विवाह कानुनी भयो, आयरल्यान्डको उदारमा रुपान्तरणको लागि अचम्मको माइलस्टोन, र खुला देश.
यसरी, तपाईं डब्लिन एक आश्चर्यजनक वैकल्पिक LGBT पाउनुहुनेछ- एम्स्टर्डम र बर्लिन मैत्री गन्तव्य. जुन डब्लिनमा गर्व महिना हो, तर तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय डब्लिन गे थियेटर फेस्टिवल पनि जाँच गर्नु पर्छ, संसारमा सबैभन्दा ठूलो.
जर्ज बारमा ककटेल वा पार्टीहरू, डब्लिनमा एक समलिay्गी संस्थान, PantiBar, ऑस्कर क्याफे, समुद्री यात्रा, वा आराम गर्न समलि .्गी सौना साँच्चिकै डबलिनमा आश्चर्यजनक LGTBQ समुदायको आनन्द लिनको लागि चीजहरू छन्.
8. अति उत्तम LGBT मैत्री गन्तव्य: बेल्जियम
गेन्ट र ब्रसेल्स लाई2बेल्जियममा सब भन्दा अद्भुत LGBT- अनुकूल गन्तव्यहरू. यो देश समलि sex्गी विवाहलाई वैध बनाउने दोस्रो थियो. ब्रसेल्समा, Rue du Marche au Charbon LGBT दृश्यको केन्द्र हो.
उदाहरणका लागि, इन्द्रेणी घर मा, तपाईं लेस्बोरमा फिल्म फेस्टिवलको मजा लिन सक्नुहुन्छ, कला प्रदर्शनीहरू, र धेरै अन्य सांस्कृतिक गतिविधिहरू. तथापि, यदि तपाईं मामा प्रकृतिले तपाईंलाई फ्लन्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसपछि चेज मामनले इन्द्रेणीको सबै र colors्ग र ग्लिटरहरूमा डिभास स्वागत गर्दछ.
9. अति उत्तम LGBTQ मैत्री गन्तव्य: लन्डन
वेस्ट एंड, पबहरूमा, वास्तुकला, रानी. लन्डन एक रोयलको कारणले मात्र होइन, तर किनभने यो युरोपमा एक अद्भुत LGBT गन्तव्य हो. शहर दुनिया को लागी एक microcosmos हो, शहरको अर्थ जुन संसारका सबै कुनामा रहेका मानिसहरूलाई स्वागत छ, समलि .्गीका लागि पनि अति न्यानो र मैत्री छ, समलि .्गी, कुरो, वा ट्रान्सजेंडर.
विशेष पुस्तक पसलहरू, अचम्म छत बारहरू, थिएटर, र संगीत, LGBT जीवन र संस्कृतिको सबै भन्दा राम्रो रमाईलो गर्न लन्डनको यति धेरै रमाइलो ठाउँहरू भयो.
त्यसैले, यदि तपाईं लन्डनमा LGTB को सबै भन्दा राम्रो उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, सर्वश्रेष्ठ क्याब्रेका लागि Dlastone सुपरस्टोर को लागी. सबै भन्दा राम्रो क्वीन दृश्य को लागी, महिमा पब शानदार छ, र इ to्ल्याण्डको सब भन्दा पुरानो LGBT किताब पसलबाट रोक्न निश्चित हुनुहोस्, समलि .्गी शब्द.
10. महान LGBT मैत्री गंतव्य: मिलान
हाम्रो सूचीमा अन्य LGBT- अनुकूल शहरहरू जस्तो छैन, LGBT अधिकारहरू मिलानमा वैध छैनन्. तैपनि, विश्वमा फेसन र भव्यता राजधानी एक जीवन्त समलि scene्गी दृश्य घमण्ड गर्दै छ र एक वार्षिक LGTBQ फिल्म महोत्सव होस्ट पनि.
जब मिलान मा, Porta भेनेजिया छिमेकन LGBT जीवन र संस्कृति को मुटु हो. Lecco र सैन मार्टिनी सडकमा, तपाईं राम्रो समलिay्गी-अनुकूल बार र क्लबहरू फेला पार्नुहुनेछ.
यो युरोपको वरिपरि यात्रा र यात्रा द्वारा ट्रेन गर्न धेरै सजिलो छ एक ट्रेन सेव तर गजबका LGBT- अनुकूल गन्तव्यहरू पत्ता लगाउन यो सँधै सजिलो हुँदैन, यसैले हामी तपाईंको लागि यो ब्लग पोस्ट लेख्दछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “१० अति उत्तम LGBT मैत्री गन्तव्यहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
समलि .्गी समलि .्गी LGBT LGBTdestferencesineurope LGBTenderlycities LGBTFenderlyDestferences LGBTQ PrideParadeEurope